Ukubuyekezwa kwe-movie "Ehle"
Igama : Handsome
Uhlobo : comedy, melodrama
UMqondisi : Til Schweiger
Abalingisi : Til Schweiger, Nora Tshirner, uMthias Schweighofer
Izwe : eJalimane
Unyaka : 2008
Ibhajethi : € 4,500,000
Ubude besikhathi : imizuzu engu-115.
Umlobi wezombusazwe kanye nomdlali odlala udumo abazange bahambisane nomthetho futhi manje udinga ukuchitha amahora angu-300 esiza izingane enkulisa. Lapho uhlangana nomngane wakhe omdala, owahlukunyezwa esikoleni futhi uqala ukuzalwa kwakhe njengomuntu womndeni kanye nomthandi wezingane futhi, nokho, indaba yothando.
Ezweni kukhona uhlaka olungakafiki lwezamasiko - amafilimu aseJalimane. Cha, asisho ukuthi lawo makampu lapho ekugcineni wonke umuntu evuka khona, ugqoke futhi ushiya amaqabunga, nabanye - wonke umuntu okhuphuka lapho, egqoka futhi ngezikhathi ezithile ashade. Lezi, futhi yilezi zithempthi eziletha abantu abaningi ngomqondo omuhle wokuthula futhi zakha ukholo emphakathini njengenhlangano yonke. Isiqephu sabo sivame ukulula futhi sithembele: yena kanye naye, baye bahamba phambili futhi ikusasa lizongena. Kusukela eminithini yesithathu kucacile ukuthi yiluphi uhlobo lwekusasa ... Kodwa ukubuka ifilimu elinjalo kusemuhle: ubuchopho kufanele buphumule futhi.
Lapha nalesi sikhathi: amaJalimane avula ifilimu enkulu "mayelana nothando" - ehlekisayo, engacindezeli, enhle futhi ehambisana neTil Schweiger. Yikuphi, ngendlela, engadlala indima yokudlala futhi iqondisa i-cynic, naye wasiza ukubhala umbhalo, wabeka ifilimu, futhi wathola imali kuye. Futhi, abantwana bezingane zabo abasha banamathele ebuciko obuhle be-synema - wonke umuntu othole indima efilimu kababa. Kodwa inkontileka yomndeni waseJalimane akuyona yona iRussia mezhdusoboychik (ukunikeza izindima eziyinhloko kumfazi nezingane kuphela ngoba "... uma kungenjalo mina, ngubani?").
AmaJalimane, angabantu abanomdlandla futhi abanomthwalo wemfanelo, yingakho benza konke onembeza - ngisho noma ubaba ozalwayo ehleka esihlalweni somqondisi. Ngakho-ke, ngoba i-movie Schweiger - "ngiyabonga" owesifazane omkhulu futhi ongenasici! Lokhu-ke, akusiyo "isibopho esingenalutho emgwaqeni" futhi ngokuqinisekile akusikho "iKnockin 'eZulwini", kodwa akuyona into ehlukile-ye-comedy, eyayiyinkimbinkimbi emisebenzini enesivunguvungu sezithombe zobulili zaseJalimane.
Indima enkulukazi yabesifazane eTill yayihlakaniphile ngokwanele ukungamemeli imodeli yama-German ebomvu. U-Nora Chirner akaziwa ngokukhethekile ngaphandle kweJalimane, ungumdlali wezemidlalo wezobuciko kanye nomdlalo we-serial, owaziwayo eminyakeni yamuva ezweni lakubo ekhula ngokukhipha imifino nemingcele. Ukunyakaza kwakhe okungaqondakali, "ukuthungatha okuhle" - lokhu, ngokusho kukaSchweiger ngokwakhe, wamthatha kakhulu kangangokuthi u-Anna wabhalwa phansi ngaphansi kweChirner. Eqinisweni, ngoba, mhlawumbe, uNorah uyimvelo futhi akabukeka emuhle nhlobo, okungafani nokuzifihla intombazane enhle.
Ifilimu inconywa ukuthi ibukwe yinoma ubani ongenakho okwanele ukuchayeka okwezinsuku eziningi zezinsipho, kodwa ngenjabulo yombukiso womunye umuntu afana kakhulu. Ukuze uqonde eyakho.
PS Yebo, bonke abalandeli bebhokisi bangabona i-cameo noWladimir Klitschko. Cha, ngeke ashaye uSweiger.
Usuku Luni Lomakhi ngo-2015? Imibono yalesi simo futhi uhalalisele ngeholidi
Indlela yokuhlela iholidi?
Indlela yokuzilibazisa kwamasiko
Kujabulisayo ukugubha uNyaka Omusha nabangani
Izigqoko zephepha ngezandla zakho
Izimangaliso Zonyaka Omusha
Ukunakekela izipikili ezinesibindi neMawala
Kubaluleke kangakanani ubisi lwebele?
Indlela yokugwema izingxabano emndenini
I-Adenoids enganeni: ubuyela emuva
Umbala weGomethri: imivimbo - umkhuba omusha wasentwasahlobo
Inkukhu ejoyiwe yaseNdiya
Iphupho lika-sitrobheli ngaluphi?
Izindlela zokuzivikela ze-Gestalt psychology
Banana massage ngokumelene cellulite
Indlela yokucela izandla zomuntu othandekayo: imibono yesipho esingcono